ထိုးကျွေးတတ်သူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ထိုးကျွေးတတ်သူများ
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Dec 14, 2013 in My Dear Diary | 43 comments
ကျနော်က ရှေးလူကြီးတွေ ရှာဖွေတွေ့ ရှိ ၊ရေးထား သိမ်းထားခဲ့ တဲ့ ၊ ထဲထဲဝင်ဝင် ပညာရပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်..လေးစားတယ်။
ဒီလောက်ခေတ်မှီနေတဲ့ အိုင်တီခေတ်ကြီးမှာ ရှေးဟောင်းပညာကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ကြောင်တယ် ထင်မလားမသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ပညာရပ်တိုင်းမှာ တန်ဘိုးဆိုတာရှိသလို၊ မြှုပ်ကွက်တွေလဲရှိတယ်..။ ကိုယ်အသုံးမပြုပေမယ့် အသုံးပြုတတ်တွေကြောင့် အသုံးပြုသူလဲ ခံစားခွင့်ရှိသလို တစ်ပါးသူအတွက်လဲ အကျိုးရှိခဲ့ တယ်ဆိုတာ သိခဲ့ ရတယ်။
ပြောမယ်ဆို မဒမတို့ အဘိုးနဲ့ ဘကြီးက ဖိုထိုးတယ်၊ အဂ္ဂိရတ် ဖိုထိုးတာ။
အဂ္ဂ=မီးကို ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာ၊ ရတ်= အသုံးချသောနည်းပညာလို့ လဲ အကြမ်းဖျဉ်း နားလည်ထားပေါ့။ သူ့ ဘကြီးဆိုတာကလဲ သူ့ အဒေါ်ရဲ့ ယောကျာင်္းပါ..ဦးထွန်း…တဲ့ ။
မဒမ်ရဲ့ အဘိုးက အရင်ကနာမည်ကြီး လက်ဝှေ့ သမားကြီး…
အပေါင်းအသင်းခင်လွန်းပြီး လက်ဝှေ့ ထိုးပြန်လာတိုင်း အပေါင်းအသင်းတွေ အကုန်ခေါ်လာပြီး
တစ်လကိုးသီတင်း အိမ်မှာ ချက်ပြုတ်ကျွေးရိုးရိုး အဘွားရဲ့ သိမ်းထားတဲ့ အထုပ်လေး လျှော့
နောက်နာမည်ကြီးလွန်းလာတော့ ပြိုင်ဘက်မရှိ ပွဲစဉ်မရှိ ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ပွဲစီစဉ်သူတွေက
ဆရာရင်းနဲ့ ထိုးဖြစ်အောင်စီစဉ်ခဲ့ ကြတာ…စင်ပေါ်ေ၇ာက်တော့ ဆရာရင်းကို ခြေကန်ချက်တစ်ချက်ထဲနဲ့ အသက်ပါခြွေယူပစ်လိုက်တယ်၊ သူကိုယ်တိုင်လဲ နှာခေါင်းရိုးကျိုးသွားတယ်…။
မရည်ရွယ်ပါဘဲ ဆရာ သေဆုံးသွားတော့ နောင်တရ ပြီး တရားဘောင်ကို ၀င်လို့ဘုန်းကြီး ၀တ်ခဲ့ တာ…။
လက်ဝှေ့ ထိုးတုန်းက အဘွားရဲ့ အထုပ်လေးက လျှော့ယုံဘဲ လျှော့တာ။ ဘုန်းကြီးဝတ်ကာမှဘဲ အဘွားအထုတ်က ခွက်ချွတ်လက်ချွတ် ကို ပြောင်တာ။ ဘဘုန်းက ဖိုထိုးတာကိုး။ အဘွားလဲ ရှိသမျှရွှေ၊ လယ်၊ တောင်ပေါ်ခြံ အကုန်ပြောင်တော့ ဒီစိတ်နဲ့ ဘဲ သေဆုံးခဲ့ ရတာ…။
အဲဒီတော့ မဒမ့်အမေနဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဖို ဆိုရင် နံပြားဖိုတောင် စေ့စေ့မကြည့်ရဲအောင်ကို စိတ်နာထားတာ…။
သူ့ ဘကြီးလဲ ဒီလိုဘဲ ရှိသမျှ လယ် ပြောင်ပြီ။ သူ့ ကိုယ်သူ အဘဘိုးဘိုးအောင် သားထင်နေပြီး အိမ်လာလည်ရင် တဘောင်တွေ၊ သိုက်စာတွေ၊ အဂ္ဂိရတ်စာတွေ ပါးစပ်က အမြှုပ်ထွက်မတတ်ရွတ်၊ သူများအားမှန်း အလုပ်ရှိမှန်းလဲ မသိ၊ ရေနွေးကြမ်း ၃ အိုးလောက်ကုန်အောင် လေပစ်တာ။ မဒမ်အမေက နဲနဲ ဟောက်ပေးမှ အပြောရပ်တာ…။ စဉ်းစားပြီး မေးတော့လဲ သူ့ မှာ ဘာဓါတ်ကိုမှ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိုးဘူးတာမရှိဘူး…ရွှေဖြစ်စမ်းနေတာတဲ့ …လောလောဆယ် တော့ သမီးနားကပ်ပါ ပြောင်နေပြီ…။
ကျနော့်အတွက်က ကြားထဲက အတွေးများတယ်…ကျနော်ဖတ်ဘူးတာက ပုဂံရာဇ၀င်မှာ အရှင် အဇ္ဇဂေါဏ က ပုဂံတပြည်လုံးမှာ မုဆိုးမကအစ ဘုရားတည်နိုင်အောင်ကို ရွှေမိုးရွာသလို ရွှေဖြစ်လမ်းနဲ့ ကယ်မခဲ့တာ။ နဂါးနီ သီချင်းမှာတောင်ပါတယ်လေ။
အဂ္ဂိရတ်မှာက ၂မျိုးရှိတယ်…စားလမ်း ရိက္ခာထောက်နဲ့ အထက်ထွက်ရပ်လမ်း။
စားလမ်းဆိုတာက ရွှေဖြစ်ငွေဖြစ်ထိုးတာ…အဲ ရိက္ခာထောက်ဆိုတာက ကျင့်ကြံ အားထုတ်နေရင်း တဖက်က စားရိတ်ရအောင် ရွှေဖြစ်ထိုးတာ..။
ဒါဖြင့် ဓါတ်ကြီးလမ်းမှ ကြာတာလား စားလမ်းက လွယ်တာလားလို့ မထင်နဲ့ …သူလဲ ခက်တာဘဲ။
ကျနော်အကျင့်က ခက်တာကိုမှ လုပ်ချင်တာ…သူလိုကိုယ်လို လူတိုင်းလုပ်နိုင်ရင် မလုပ်ချင်ဘူး…သူလုပ်ပေ့ စေ။ အခုကျနော် ကြားကစဉ်းစားတာ ရှေးအစဉ်အဆက်တန်ဘိုးထားတဲ့ ပညာကို လူတွေ ဘာကြောင့် မယုံသလဲ၊ ဘာကြောင့် အထင်သေးတာလဲ….ဘာကြောင့် မဖြစ်တာလဲ ဆိုတာ လနဲ့ ချီစဉ်းစားတယ်…။ ပညာရပ်…ကျနော်ဘ၀မှာ အလေးစားဆုံးနဲ့ စိတ်အ၀င်စားဆုံးစကားလုံးဘဲ။
ဒီတော့ ဒီပညာကို စိတ်ဝင်စားလာတာနဲ့ ကိုယ်ရှာဖွေရတော့တယ်…စာပေအထောက်အထား။
လောလောဆယ် လက်လှမ်းမှီနိုင်တာက နက္ခတ္တရောင်ခြည်နဲ့ လက်ကျန် ရှေးစာအုပ်တွေ ။ ရသမျှ သိမ်းကြုံးဝယ်ပြီး သေချာဖတ်တယ်…။
မေးတယ်။။။ လုပ်မယ်လို့ ဆုံဖြတ်ပြီးတာနဲ့ မဒမ်ကို ကြေညာလိုက်တယ်..။
“ ဒီနှစ် ကိုယ်ဇာတ်မကတော့ဘူး…ဖိုထိုးမယ်…အဂ္ဂိရတ် ထိုးမယ်” လို့ ။
သြော…သြော်..ဒီစကားကြားလိုက်တာနဲ့ မဒမ်တို့ မိသားစုဝင်တွေ အားလုံး၊ အိုစမာဘင်လာဒင်က သူ တို့ အိမ်ကို လေယာဉ်နဲ့ ဝင်တိုက်မယ်လို့ အမိန့် ပေးတဲ့ စကား ကြားလိုက်သလိုဘဲ…။
မဒမ်အမေ မောင်နှမတွေ အားလုံး မျက်စိပျက် မျက်နှာပျက်နဲ့ …တားလိုက်ကြတာ..။သူတို့ ကမျိုးရိုးနဲ့ ထိထားတာလေ။
သူတို့ ထင်တာက ကျနော် တစ်သက်လုံး ဖိုထိုးတော့မယ် ထင်နေတာကိုး…။
ကျနော်က အငြင်းပွားတဲ့ ပညာကို စမ်းချင်တာ လက်တွေ့ လုပ်ချင်တာ…ဒီတော့ နားဝင်အောင်ပြောပြတယ်…။ အတိုက်အခံ လုပ်ပြောတယ်…။ ကျနော့်စိတ်ကိုသိတော့လဲ မဒမ်အမေက လေအေးလေးနဲ့ …..
“ ကလေးနဲ့ မိသားစုတွေ တင့်တောင့်တင့်တယ်နေနေတာကိုလဲ ငဲ့ပါကွယ်”တဲ့..။ ကျနော်က ဂတိပေးပါတယ်…။
ကျနော်ဖိုထိုးမယ် ဆိုတာနဲ့ သူ့ ဘကြီး ကြားပြီး အပြေးလေး သုတ်ခြေတင်လာတာဘဲ….။၀မ်းသာအားရပေါ့…။
“ ဒီလိုရှိတယ်…ငါ့တူရဲ့ ကအစ…..သူသုံးနေကြ ဓါတ်လမ်းကို ပြောတော့တာဘဲ…။ရွှေဖြစ်လမ်း..
“ ဘော်ဒန်သံရွှေ ဒီိလေးထွေ…ပေါ့..။ ကျနော်က ပြန်မေးတယ်…
“ အော်…ငါ့တူရယ်…ဘော်ဆိုတာ…ခဲမဖြူတို့ ဘော်တို့ ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား…အခုတစ်လုံးချိုင့်( ထမင်းဂျိုင့်)တွေပေါ့..ဒါဘဲ”
“ ဘော်ဆိုတာ…အဂ္ဂိရတ်အခေါ်နဲ့ ဆို ငွေ ကို ပြောတာ…ဘကြီး…”
“ ဒါလဲ ကြေးနီပါဘဲ ဒါပေမယ့် မစစ်ဘူး…သူ့ ကို ၀ါယာကြိုးလပ်ရင် ပျော့ပြောင်းအောင် တစ်ခြားဓါတ်တွေ ရောထားတယ်…ကြေးနီလိုချင်ရင် ဒုတ္ထာ ကနေ ယူရမယ်…ဒုထ္တာကလဲ မဲနယ်ဆိုးတဲ့အတုရှိတယ်…တောင်တွင်းကြီးဘက်က ဒုတ္ထာက ကြေးနီ ပါဝင်မှုပိုများတယ်…ဒီထက်စစ်တာလိုချင်ရင်…လူရဲ့ ဆံပင်ကို မီးကျွမ်းအောင်လုပ်…အားလုံး ပြာခဲမဲမဲကြီး ဖြစ်သွားမှ လက်ခြားချော်နဲ့ ထိုးပြီး ငှဲ့ ယူရင် ကြေးနီ စစ်စစ်ရမယ်..“
“ ငါ့တူ တယ်ဟုတ်ပါလား…ဘကြီး…သံကိုတော့ ခြသံ(တောင်ပို့ သံ)။ ရေသံ၊ စုံနေပြီ…အိမ်က ထင်းခုတ်တဲ့ ဓါးမတောင်မကျန်ဘူး..စမ်းပြီးပြီ…မဖြစ်ဘူး..”
“ ဘကြီးက ဓါတ်ကောက်တာတွေ လွဲနေတာကိုး…ဘယ်ဖြစ်မလဲ…ဒီစာမှာညွှန်းတဲ့ သံဆိုတာ လယ်မှာထယ်ထိုးတဲ့ ထယ်သွားထိပ်ကသံကိုပြောတာ…ရွှေဆိုတာ မိန်းမနားကပ်မဟုတ်ဘူး…အခေါက်ရွှေကို ပြောတာ…”
“ ဟုတ်လိုက်လေ…ငါ့တူရယ်…တစ်သက်လုံး လွဲလာတာ ခုမှဘဲ ပါရမီ ရှင်နဲ့ တွေ့ တာ …ကဲ…ပြန်လိုက်ဦးမယ်ဟေ့…”
အမှန်ဆို ကျနော်က ဘာပါရမီရှင်မှ မဟုတ်ဘူး…သူ့ ဘာသာ ပညာရပ်တစ်ခုကို သေချာမလေ့လာဘဲ ရမ်းချနေတာ…။
သိပ်မကြာဘူး…ဘကြီးထွန်း သူ့ သားမက်ဆိုက်ကား တစ်စီးရောင်းပြီး ဖိုထိုးတော့တာဘဲ…။
ကိုယ်ကလဲဆရာကြီးမဟုတ်တော့ လေ့လာဆည်းပူးရင်း နောက်ထပ် ဖိုထိုးသူတွေတွေ့ ရတာဘဲ…။ ဖိုထိုးပြီဆိုတာနဲ့ပြောချင် ဆိုချင် ၊ ကူညီချင်သူတွေ တွေ့ တာဘဲ…။
တစ်ချို ကြလဲ တစ်မျိုး…
“ ဘယ်လိုလဲ ဖိုထိုးမယ်ဆို….ရွှေဖြစ်ရင် ပြောနော်…ကယ်ဘို့ လဲမေ့ မနေနဲ့ ..”
“ ကျနော်ဖိုထိုးတာ ရွှေလိုချင်လို့ မဟုတ်ဘူး…ရွှေက အခုလဲမိသားစုကို အပြည့်ဆင်ထားတယ်…လိုရင် မီးသွေးဘိုးကုန်ခံစရာတောင်မလိုဘူး…အခုသမီးကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ပြေးဝယ်ခိုင်းတာနဲ့ ရတယ်…ခင်ဗျား ရွှေလိုချင်ရင် ခြေအကောင်းလက်အကောင်းဘဲ…အလုပ်လုပ်ငွေစုပြီး ၀ယ်ပေါ့…ကျနော့်ကိုတောင် စောင့်နေစရာမလိုဘူး…”
ဒါမျိုးလူတွေလဲ တွေ့ ရတယ်…။
မီးသွေးကို စပါယ်ရှယ်ဖုတ်ပေးတဲ့ ကူညီသူတွေလဲ ရှိတယ်…။
ဖိုထိုးမယ်ဆိုတာနဲ့ ကိုယ်က အရင်ကုန်တော့တာဘဲ…။
ဖားဖိုဝယ်ရတယ် ပြုပြင်ရတယ် ဖိုခွင်ဆင်ရတယ်…။ ဖိုကို လိုအပ်တဲ့ လေပေးဘို့လိုချင်တဲ့ မီးရဘို့လေမှန်မှန်ပေးနိုင်ဘို့ မော်တာဆင်ဘို့ မလွယ်တော့ သမီးကို ၀ယ်ပေးထားတဲ့ BMX စက်ဘီးလေးကို သမီးနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး တစ်စစီ ဖြုတ်တာဘဲ…ပြီးတော့ ဖိုခွင်ဆင်…သမီးကို ဖီးဆဲန့် အသစ်တစ်စီးဝယ်ပေး…သားအဖ၂ယောက် တက်ညီလက်ညီဘဲ…။
ထိုးမယ့်လုံတွေ ၀ယ်ရတာမနည်းဘူး…နောက် လိုအပ်တဲ့ဓါတ်ဆေးတွေ ၀ယ်ရတယ်..။ လုံကိုဇော်ဂျီမန်ဘို့ ခြတောင်ပို့ မြေ ရှာရတယ်။
တစ်ချို့ ကလဲ …
“ ဟာ…ဖိုထိုးရင် အရမ်းကာရော မထိုးရဘူး…စည်းချရမယ်..ပွဲပေးရမယ်၊ ဂါထာတွေရွတ်ရမယ်..အဖျက်အဆီးများတယ် ဇော်ဂနီဇော်ဂနက်တွေက နှောက်ယှက်ပြီး…အောင်မြင်တော့မယ့် ဓါတ်ကိုပါ ခိုးယူတတ်တယ်”
“ ခင်ဗျားပြောတာလက်ခံပါတယ်….ဒါပေမယ့် ရွှေ တစ်ကျပ်သားနဲ့ ခဲတစ်ကျပ်သားပေါင်းရင်…ခဲ+ရွှေ ၂ကျပ်သားရမယ်…
ပိုက်ဆံ ၅ကျပ်နဲ့ပိုက်ဆံ ၂၀နဲ့ ပေါင်းရင် ၂၅ကျပ်ရမယ်လို့ သေချာသိရင် ပေါင်းကာနီး…ဂါထာရွတ်စရာ လိုသလား၊ စည်းချစရာလိုသလား”
“ ဟာ ခင်ဗျား ဂွကျလိုက်တာ…ကျုပ်ကစေတနာနဲ့ ပြောတာ…”
ကျနော် သူ့ ကို စော်ကားတာမဟုတ်ဘူး…တစ်ကယ်လဲ သူကဖိုထိုးနေတဲ့ လက်တွေ့ သမားမဟုတ်ဘူး…လေနဲ့ ဆရာလုပ်နေတာ…။
ဒီလိုနဲ့ သားအဖနှစ်ယောက်ဖိုထိုးတော့တာပါဘဲ…ဖိုထိုးတယ်ဆိုလို့ ဓါတ်ကိုဘဲစထိုးတာမဟုတ်ဘူး…အထောက်အကူပြု ဓါတ်တွေ အရင် လုပ်ယူရတာ…။ သွပ်ကို အရင်းတည်ရတာဆိုတော့ ဓါတ်ခဲဟောင်းတွေရှာပြီး သွပ်တွေယူရတယ်..သန့် သွားအောင် သွပ်ကိုအရည်ကြိုပြီး ထုံးရည်ကြည်ပူပူထဲမှာ အကြိမ်ကြိမ်လောင်းယူမှ မှန်ကြည့်လို့ ရအောင်ကို သန့် နေတဲ့ သွပ်စစ်စစ်ရတာ..။
ဒီအလုပ် လုပ်နေရင်းဘဲ အသိမိတ်ဆွေတွေ အများကြီးတိုးလာတာ..။ မွန်ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ တွေ့ တယ်…ဆရာတော်က မိဘမဲ့ ရော…မိဘရှိပြီး ဆင်းရဲနေတဲ့ ကလေးတွေကို ကျောင်းမှာ ခေါ်ကျွေးမွေးတယ်…ကျောင်းထားပေးတယ်…လူပျိုအရွယ်ရောက်ရင် စင်္ကာပူကိုပို့ ပေးတယ်…အလုပ်လုပ်…ပြီးရင် ငွေပြန်ပို့၅ပုံပုံ…၃ပုံက ကောင်လေးတွေရှေ့ ရေးအတွက် လယ်တွေ အိမ်တွေ
၀ယ်ပေးတယ်…၁ပုံက မိဘတွေကို ပေးတယ်…ကျန်တဲ့ ၁ပုံကို သူဖိုထိုးတယ်…။ ကလေးတွေ ဘ၀ရှေ့ ရေးကို ရွှေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်…။
“ ဘုန်းကြီး…ရွှေကိုဘာလုပ်ဘို့ လဲ”
“ ဘုန်းကြီး လူတွေကို ကယ်ချင်သေးတယ်…”
“ အော်…ဒကာလေးကလဲ ရွှေဓါတ်ကို ထိုးမယ်ဆို သွပ်လိုတယ်လေ…ဒါကြောင့် ကျောင်းကိုလှုထားတဲ့ သွပ်ပြားတွေကို အရည်ကျိုနေတာ”
“ အရှင်ဘုရား…စာမှာပါတဲ့ သွပ်ဆိုတာ…အဲဒီ အမိုးသွပ်ပြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး…ဓါတ်ခဲ သို့ မဟုတ် မီးရထားလမ်းတွေမှာသုံးတဲ့ သွပ်ငုတ်တိုင်တွေကတစ်ဆင့် သန့် ထုတ်တဲ့သွပ်စစ်စစ် ကိုပြောတာဘုရား”
“ အဟုတ်ဘဲလား…ကျုပ် ကျောင်းက သွပ်တွေ တော်တော် ကုန်နေပြီ…ဒါကြောင့် ဘာမှ မဖြစ်တာနေမှာ”
“ ဒါဖြင့် နာ…ဆိုတာက”
“ နာဆိုတာ ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်အောက်ဖက်တွေမှာဆွဲသီထားတဲ့ခဲပျော့ကိုပြောတာပါ…ဘက်ထရီအိုးတွေက ခဲကျွတ်တွေမဟုတ်ဘူး…”
“ အော်….ခဲလို့ ရေးလိုက်ရင်ပြီးရော…အခု ကျုပ် နာ ဆိုတာ ရှာနေတာ…တော်တော် ကြာနေပြီ..ဘယ်လိုမှ မတွေ့ ဘူး…ခုသိပြီ..
“ ဆိုင်တွေမှာ ရောင်းတဲ့ ပြဒါးက ခဲနဲ့ ရောထားပြီး အကြံအဖန်လုပ်ထားတယ်…ပြဒါးစစ်စစ်ကို လိုချင်ရင် …အဆက်အသွယ်ကောင်းရင်တော့ ဓါတုဗေဒ ဓါတ်ခွဲခန်းတွေမှာ မေးဝယ်ပါ…တစ်ချို့ နိုင်ငံခြားက လာတာဆို ပြဒါးစစ်တယ်…တခြားနည်းနဲ့ ဆိုရင်တော့ အသီးမသီးတဲ့ သင်္ဘော အဖိုပင်ကို ယူပြီး ဇောက်ထိုးထား ရေနံချေးအ၀တ်ကို ထိပ်မှာပတ်ပြီးမီးရှို့ …အောက်က မြေအိုးခဲထားရင် ပြဒါးစစ်စစ်တွေ စီးထွက်လာမယ်…အဲဒါကို ထပ်သန့် ချင်ရင် ပျားရည်စစ်နဲ့ နယ်ပြီး ရေဆေးလိုက်တာနဲ့ ပြဒါးစစ်ရတယ်…ဒါမှမဟုတ် ကွမ်းရွက်စိမ်းနဲ့ နယ်ရင်လဲ ပြဒါးရဲ့ အညစ်အကြေးတွေထွက်တယ်…”
“ ဟုတ်ပြီ…ဒီလိုလုပ်ပါလား..ဒကာလေး…ဒကာလေးမိသားစုအတွက်ဆန်ပြည့်ဆီပြည့်ဖြည့်ပေးမယ်…ဒကာလေးကိုလဲ လခပေးမယ်…ဘုန်းကြီးဆီမှာ ဖိုထိုးပေးပါလား“
“ မလုပ်ပါနဲ့ ဘုရား…တပည့်တော် ဘာမှမတတ်သေးပါဘူး…သိသလောက်လေး ကူညီပြောပေးတာပါ တပည့်တော်မှာလဲ အလုပ်တွေများတယ်…”
“ ဒါဆို အမြဲ လာလည်ကွာ…”
နောက်ဆရာတော်တစ်ပါးက ရန်ကုန်ဘက်က လာတာ ဒီိနယ်ဘက်မှာ ခြံမြေ၀ယ်ပြီးကျောင်းဆောက်လို့ …ဖိုထိုးတယ်လို့ သတင်းလွှင့်ထားတာ…
ဖိုထိုးတယ်ဆိုတာနဲ့ဖိုသမားတွေ ၀င်လာမဆည်းဘဲ…။
ဘုန်းကြီးက ထိုင်နေရင် ကတ္တီပါခေါင်းအုံးအနီရောင်လေးကို တံတောင်ခုပြီး ထိုင်တာ…
ခါးပန်းကြိုးထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ ဓါတ်လုံး ၆လုံးလောက်ကို ခေါင်းအုံးလေးပေါ်တင်လိုက်တာဘဲ…
“ ဒကာ…အခုဖိုထိုးနေတာ…ဒီိလိုဓါတ်လုံးမျိုးပိုင်ဘူးပြီလား…ရဘူးပြီလား…သေချာကြည့်…ဒါကသွပ်ဓါတ်လုံး၊ ဒါကပြဒါးနဲ့ ထိုးထားတာ၊ ဒါကသံနဲ့ ထိုးထားတာ…နောက်ဆေးဒါန်းဓါတ်လုံးတွေလဲရှိသေးတယ်…”
ပြလိုက်တဲ့ ဓါတ်လုံးကြည့်ပြီးတာနဲ့ ပြောနေတဲ့ ဖိုသမားကပါးစပ်ပိတ်ပြီး…၀ပ်စင်းသွားတာဘဲ..။ ကျနော်က လူကိုထက်မူကိုကြည့်တာ…
ဓါတ်တွေမှာလဲမြှုပ်ကွက်ရှိသလို ဘုန်းကြီးတွေ လူတွေမှာလဲ မြှုတ်ကွက်ရှိတယ်…
တရားကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စွဲစွဲမြဲမြဲကျင့်ကြံနေသူတွေ သံဃာတော်တွေရဲ့ကိုယ်နှုတ်အမူအယာတွေက နူးညံ့သွားတယ် ဆိုပေမယ်…အခုကျနော် က ဇာတ်မင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့ အကြုံနဲ့ သုံးသပ်လိုက်တော့ ဒီဘုန်းကြီးက တရားကြောင့် နူးညံ့တာမဟုတ်ဘူး…
နည်းနည်း ဂျယ်နေတာ…သိပြီ။ (မတန်ခူး ကြီးကြီးလိုမျိုး)သူ့ လက်ဟန်ခြေဟန်…ထူးခြားနေပြီ…။
အလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပြီး…အဖြေရှာရမယ်ဆိုတော့…သူလိုချင်တဲ့ ဂဏန်းလေးတွေ…၂လုံး၃လုံး…ခင်းပြီး ကျားကွက်ရွှေ့ လိုက်တာနဲ့ …ပေါ်ပါပြီ…
“ ကောင်းလိုက်တဲ့ …အမြင်ဓါတ်ဘဲ….ကွက်တိဘဲ…မနေ့ က ၁၀၀၀ဘိုးရလိုက်တယ်…မနက်ဖြန် ဘာရထားလဲ..”
“ အရှင်ဘုရား ဒီလောက်ဓါတ်တွေ နိုင်အောင်ထိုးထားတဲ့ အကျင့်သီလနဲ့ ဆို…လောကီကို အကုန်နီးပါးမြင်နိုင်တာဘဲ…၂လုံးတိုက်နဲ့ ချဲဂဏန်းကို မမြင်ဘူးလား…”
“ ရှုးးးးးး တိုးတိုး၊ အဲဒီဓါတ်လုးံတွေက ပိုက်ဆံပေးပြီး ၀ယ်ထားတာ…တကယ် ဖိုထိုးနေသျူေတွကို လိုအပ်တဲ့ ဆေးဘို့ မီးသွေးဘိုးနဲ့ ပညာကြေးနင့်နေအောင်ပေးလိုက်ရင်…လိုချင်တဲ့ ဓါတ်လုံး ၀ယ်လို့ ရတယ်…ဒါတွေဆောင်ထားပြီး လူရှိန်အောင် လုပ်ထားတာ…”
တဖြည်းဖြည်း အတွင်းရေးတွေသိလာမှ ဒီဘုန်းကြီးက မလေးရှားလူပို့ နေတဲ့ အဖွဲ့ ။။။လာတဲ့ လူတွေကလဲ စစ်ဘက်နဲ့ ပါတ်သက်သူတွေ..နောက်ဆုံးပြောရရင် သူ့ မှာ စစ်သုံးဆက်သွယ်ရေးစက်ကအစရှိနေတာသိခဲ့ ရတယ်…။
နောက်ဆရာတော်၂ပါးမှာ တစ်ပါးက သင်္ဘောကပ္ပတိန်ဟောင်း ပညာတတ် ဘွဲ့ ရပြီးသား…ဖိုထိုးပြီး…ဘာမှန်းမသိတဲ့ ဓါတ်လုံးကို ပါးစပ်ထဲမှာ အမြဲငုံထားတာ…ဖိုထိုးတယ် အယုနတ္တော အကုန်ပြောတယ်…။
ဒီပါတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကို ပြဒါးရှင်နဲ့ ကယ်ဘို့ တဲ့…၊ စော်ကားရင်တော့ တစ်ရွာလုံးနူအောင်လုပ်မယ်ဆိုဘဲ…။
ရွှေပြာရရင် နာ(ခဲ)ကို အလှုမှာချက်တဲ့ မိုးဗြဲဒယ်နဲ့ အပြည့်ကျိုပြီး ရွှေသေပြာ ကွမ်းရိုးတစ်တို့ ထည့်တာနဲ့ တစ်ဒယ်လုံးရွှေဖြစ်အောင် ကျိုးစားနေတာ…လောလောဆယ် ရွှေပြာမရသေးဘဲ..ရွှေလုံးပါပျောက်ပျောက်သွားလို့ စိတ်တိုနေဆဲ…တပည့်တွေကို အော်ဆဲနေဆဲ…။
ဓါတ်လုံးက မစားနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် စားထားတဲ့ ရွှေတွေကို ပြန်အန်တော့တာ…ပြာ အဖြစ်နဲ့ ..။ အဲဒီပြာကို ပြောတာ ခဲတစ်ဒယ်လုံးထဲကို ကွမ်းတစ်တို့ ထည့်ရုံနဲ့ အကုန်ရွှေဖြစ်တယ်ဆိုတာ.။
ကိုယ်တည်ထိုးထားတဲ့ ဓါတ်ကမမှန်ရင် ရွှေဓါတ်လုးံဖြစ်နေမယ်…ရွှေကျွေးရင် စားမယ်…လမ်းမမှန်တော့ ပြန်မအန်ဘူး…တစ်သက်လုံးကျွေး…တစ်သက်လုံးစားမှာဘဲ…ပြန်တော့မအန်ဘူး။။။ အဲဒီမှာဘဲ ခြံပြုတ်အိမ်ပြုတ် စီးပွားပြုတ်တာ…လောဘစိတ်လေ…။
မီးက အကြမ်းဖျဉ်း ၃မျိုး၊မီးအေး၊ မီးလတ်၊ မီးပြင်း…။မီးမပိုင်ရင် ဖိုမကိုင်နဲ့ တဲ့..။
ရှေးပညာရပ်တွေခက်ခဲတယ်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ…။ စာတွေ့ လက်တွေ့ လွဲတာတွေ အများကြီးဘဲ…။
အနောက်တိုင်းဂန္ဓာရီ ပညာတွေမှာက ဆေးအချိန်အဆ တိကျတယ်…ဓါတ်သန့် သန့် ကို အချိုးအစားမှန်ပုံသေနည်းရှိတယ်..။
ဥပမာ….ဓါတု အီကွေးရှင်း ၃၃ ကြောင်းလိုပေါ့…မှားစရာမရှိဘူး…ကွက်တိဘဲ..။
ကျနော်တို့ ဆီမှာက ချိန်ခွင်လေးတွေနဲ့ ချိန်တယ်…ရွေးစေ့ နဲ့ ချိန်တယ်…။
နောက်ကြေးနီ တစ်ကျပ်သားထည့်ရမယ်လို့ အတိအကျမရေးဘဲ…ဒုတ္ထာ၅ ကျပ်သားအမှုန့် ပြုပြီး ထိုးရမယ် ဆိုရင်…
ဒီဒုတ္ထာ ၅ကျပ်သားမှာ ကြေးနီဓါတ်ပါဝင်မှု ၇ာခိုင်နှုံး အချိန်အဆက တောင်တွင်းကြီးက ဒုတ္ထာရဲ့ ဓါတ်သိပ်သည်းမှုနဲ့ မော်လမြိုင်က ဒုတ္ထာ သိပ်သည်းမှု မတူနိုင်ဘူး…ဒုတ္ထာ ၅ကျပ်သားသုံးတာခြင်းတူပြီး…ကြေးနီဓါတ် သိပ်သည်းမှု တူနိုင်မလားဆိုတာ မတွေးကြတော့ လွဲကုန်ပြီ…ကြားထဲ မဲနယ်ဆိုးထားတဲ့ ဒုတ္ထာ အတုနဲ့ ထိုးနေရင်တော့ သွားပြီ ..ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘူး…။
စိန်နီမြင်းသွား ဆိုတာကလဲ ရွှေလောက်ဈေးကြီးတယ်…အတုရှိတယ်…သာမန် ထိုးကာစလူက ဘယ်လိုမှ မခွဲနိုင်အောင်တူတယ်…ဒါကို အစစ်လို့ ထင်ပြီး ထိုးနေရင်လဲ သွားတာဘဲ…။
ဒီလိုအမျိုးမျိုး တွေ့ တာတွေထဲက ဆောင်သင့်ရှောင်သင့်တာတွေ သတိထားပြီး သားအဖနှစ်ယောက် ဖိုထိုးတာဘဲ…။
ရွှေလိုတယ်ပြောတော့ မဒမ်ကတော့ ပါရမီဖြည့်ဖက်ပီပီ အခေါက်ရွှေ တမတ်သား ပြေးဝယ်ပေးတယ်..။
ထမင်းတောင် နားပြီး မစားနိုင်ဘူး…ကျနော်တို့ သားအဖကို မဒမ်က ထမင်းပန်းကန် ပို့ ပေးတယ်.
..ဖိုထိုးရင်းစားဘဲ…သမီးက လေ ရအောင် ဖားဖိုနဲ့ ဂျွိုင်းထားတဲ့ စက်ဘီးလေးကို လိုသလိုကျနော် ညွှန်ကြားချက်နဲ့ နင်းတာပေါ့…ပျော်စရာလဲ ကောင်းတယ်…။
ဖိုထိုးရင် ဂါထာရွတ်ရမယ် ပြောပေမယ့်…သမီးကတော့ သူ့ အဖေ ကိုယုံတယ်…သူဘာရွတ်လဲမမေးနဲ့သူ့ ခါးပိုက်ထဲမှာ အပြည့်ဝယ်ထည့်ပေးထားတဲ့ ဇီးထုပ်မျိုးစုံစားလိုက် ၊ ပိုးအိစံ သီချင်းလေး တစ်ကြော်ကြော်အော်ဆိုလိုက်နဲ့ ..။
နေ့ ဘက်ဖိုထိုး…ညဖက်စာဖတ်အဖြေစဉ်းစားနဲ့ …..။ ပါတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးပြောတဲ့ ကြားက..၁လ ကျော်လာတော့…
သွပ်ကိုအရင်းခံပြီး အခေါက်ရွှေ တစ်မတ်သား ထိုးကျွေးလိုက်တာ…နောက်ဆုံး…ဖြူသလိုလို ရွှေသလိုလိုနဲ့ ၃ကျပ်သားကျော်တဲ့ အခဲကြီး…ရလာတော့တယ်..။ ဘာလို့ ပြောရမယ်မှန်းလဲမသိဘူး…။
အဖြေလဲ မထွက်ဘူး…။ မဒမ်က ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ .မျက်စောင်းခိုးပြီးထိုးတယ်.။
သူ့ အမေကလဲ ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်။
နောက်တော့ ကိုယ်တိုင် ဘာလုပ်ရမယ်မှန်းမသိတော့ဘူး…စာညွှန်းက ပြီးပြီ။ ကိုယ်က ရွှေမဖြစ်သေးဘူး…။
ပြီးမှ တစ်ခုကို စဉ်းစားမိတာနဲ့ မဒမ့်သူငယ်ချင်းပန်းထိမ်ဖိုကို လွှတ်ပြီး…ရထားတဲ့ ဓါတ်ကို ငရဲမီး စားခိုင်းလိုက်တာ…။
ငရဲမီးဆိုတာက ဆာလဖြူရစ်အက်စစ်အပြင်းစား။ ရွှေကလွဲရင် ကျန်တဲ့ ဓါတ်တွေ အကုန်စားပြီး လောင်ကျွမ်းနိုင်တယ်…။
သူ့ သူငယ်ချင်းက ငရဲမီးစားပြီးမှတ်ကျောက်တင်ပြီးတော့ မဒမ်ကအပြေးပြန်လာတယ်…
“ ကို….သူပြောတယ် ငရဲမီးလဲခံတယ်..မှတ်ကျောက်လဲ အတင်ခံတယ်…ဒါပေမယ့် ၁၅ပဲရည်လောက်ဘဲ ဖြစ်နေတယ်တဲ့..။
ဒါကို သန့် လိုက်မိုက်ခွဲ( ရွှေသန့် အောင်ခွဲထုတ်ခြင်း) ပြီး အရောင်တင်လိုက်တာနဲ့ရွှေ ဖြစ်ပြီတဲ့ …။
ငါ…ဖိုထိုးတာ ကိုလှောင်ချင်လို့ များ အတည်ပေါက်နဲ့နောက်တာလားထင်လို့တစ်ခြားမြို့ ကပန်းထိမ်ဖိုကို ငရဲမီး စားခိုင်းတယ်…
၀မ်းသာပီတိစိတ်က တစ်ကိုယ်လုံးဘဲ…။ ကြက်သီးတွေတောင်ထတယ်..။
ကျနော် ရွှေအဖြစ်သန့် မထုတ်ပါဘူး…
ကျနော်က ဘာလို့ တစ်ချီဘဲထိုးပြီး…ရွှေအဖြစ် အောင်မြင်တာလဲလို့ မေးစရာရှိပါတယ်..။
အဖြေကတော့……………….. စဉ်းစားခြင်းနဲ့ တိကျမှု..ပါဘဲ..။။
ပါရမီလို့ ပြောချင်ရင်လဲ မငြင်းပါဘူး။ အိမ်ရောက်တာနဲ့ ဖိုထိုးနေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အကုန်ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်…။ ပြီးပြီ။
မဒမ်တို့ အမေနဲ့ တစ်ခြားမိတ်ဆွေတွေကိုပြပါတယ်…ကြိုက်တဲ့ ဆီမှာ သွားစမ်းခိုင်းတယ်…။
ကျနော်လုပ်ကိုင်နေတာလဲ တွေ့ တယ်…။
ရလာတဲ့ ဓါတ်ကိုလဲ တွေ့ ပြီဆိုရင် ဒီပညာကို မစော်ကားဘို့ ပြောတယ်…။
ပညာရပ်တိုင်းမှာ မြှုပ်ကွက်ရှိတယ် နက်နဲတယ်…။
ပညာရပ်တစ်ခုကို ပြောမယ်ဆိုရင် စဉ်းစားပါ…လေ့လာပါ..လက်တွေ့ မလုပ်နိုင်ရင် မပြောနဲ့ ..။
မယောင်ရာဆီလူးပြီး လက်ပံပင် ဓါးနဲ့ ချိုင်တာတော့ မဟုတ်ဘူး…။
ကျနော်က နိုင်ငံရေးမှာ ဆရာကြီးမဟုတ်ဘူး…ဘာကောင်မှလဲ မဟုတ်ပါဘူး..။
အရှင် အဇ္ဇဂေါဏက ရွှေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ပုဂံပြည်သူတွေ ပြည်သားတွေကို ကယ်တင်ခဲ့တယ်…။
ကျနော်ထိုင်းမှာနေခဲ့တုန်းကနေ အခုထိ နိုင်ငံရေးလောကကို လေ့လာပေါင်းသင်းတဲ့အခါ….
ဘကြီးထွန်းညွန့် လို နိုင်ငံရေးဖိုထိုးသူတွေလဲ တွေ့ တယ်…..
မွန်ဆရာတော်လို နိုင်ငံရေးဖိုထိုးနေသူတွေတွေ့ တယ်…..
ပုပ္ပါးဆရာတော်လို ဖိန့် လုံးတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးဖိုထိုးသူတွေလဲ တွေ့ တယ်…
သင်္ဘောသား ဘုန်းကြီးလို နိုင်ငံရေး ဖိုထိုးသူတွေလဲ တွေ့ တယ်…
ဆေးဘုန်းကြီးလို ထိုးကျွေးပြီးရင်း ထိုးကျွေးနေတဲ့ နိုင်ငံရေး ဖိုထိုးနေသူတွေလဲ တွေ့ ဘူးပါတယ်…
ဖိုထိုးတယ်ဆိုတာ လောကီိ ကိစ္စတွေပါ…
နိုင်ငံရေးဆိုတာကလဲ လောကီ ကိစ္စတစ်ခုပါဘဲ…။
သူများကိုလဲ ကျနော် မနင်းတတ်ဘူး…
ကျနော့်ကိုလဲ လာမနင်းနဲ့ မကြိုက်ဘူး….
ဒါပေမယ့် မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ရွှေဖြစ်အောင် ကယ်မယ်လို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့….ဆရာ့ဆရာတွေ နောင်တော်ကြီးတွေကို
စေတနာနဲ့ စကားတစ်ခွန်း ပြောချင်တယ်…။
ဓါတ်သဘောကို နားလည်ရမယ်…ထောက်ကန် ရုန်းကြွ ပူးသတ် ဖိသတ် သဘော…။
အချိန်အခါကို သတိရှိရမယ်…အချိန်အဆကို မှန်ကန်ရမယ်…။
ဆေးမပိုင်ရင် ဓါတ်မကိုင်နဲ့ …။ မီးမပိုင်ရင် ဖိုမကိုင်နဲ့ ….။ စကားတစ်ခုရှိသေးတယ်…
ဓါတ်တူနာမ်တူ ဆေးဘက်ယူ…နာမ်တူသတ်က အသေရတဲ့ ..။
အရေးကြီးဆုးံကတော့ ထိုးကျွေးရတာများနေရင် လမ်းကိုပြန်စဉ်းစား…။
ချကျွေးခံရတဲ့ ဘ၀တွေ နာတယ်….။ ။
Oh My Buddha..!
So called ခေါင် ..!
သားကြီး ငါးကြီးလွတ်ဆိုတော့ အင်မတန် စိတ်ဝင်စားပါသည်…။
ရေလည် လန်းတယ်ဗျာ …
အပေါ်က ဖိုထိုးတာကိုလည်း ဖတ်သွားတယ်
အောက်က နိုင်ငံရေး ဖိုထိုးတာကိုလည်း ကြည့်သွားတယ် ….
မိုက်တယ် .. ဂွပ်ရှယ် ..
ဟို…အလင်းစက်ပို့ စ်မှာ နိ ရေးထားတဲ့။။။
ခေါင်မိုးပေါ်က ဖုတ် ၂ကောင်မြင်းတိုင်းသတိယတယ်ဆိုတော့ …ငါ့မှာ ရင်တွေ ခုန်လိုက်တာ…
ညရောက်တော့ မျက်နှာကြက်ကို ကြည့်ပြီး …အိပ်လို့ တောင် မပျော်ဘူး….။
ဆြာခေါင်ရဲ့ “ထိုး” ပြီး “ကျွေး” တာလေးက ဖတ်ရတာ အနိပ်သား…
အဲ… ဤလူ့ဘောင်မှာ ထိုးကျွေးတာတွေ အများသားမို့…
စစ်တုရင်ပွဲက နယ်ရုပ်လေးလိုမဖြစ်အောင် ရှောင်နိုင်မှဆြာရေ့…
P.S. ဆြာခေါင့်နှယ် ရွာသားတွေကို မကြောက်မလန့်
သမီးရှိတာ ဖွင့်ပြောရသလားလို့… ဟီ ဟိ
အိုက်ဒီ အကွက်ကို ညက်စိ လျှမ်းတွားဒယ် …
ဥငေး ပြောမှ ပြူးပြဲပြီး ပြန်ဖတ်လိုက်ရဒယ် ..
ခုဂစပီး နံမယ် ပြောင်းခေါ်မယ်နော် ဒက်ဒီခေါင် .. ခွိခွိ
ဒီနေ့ ဒီရက် ဒီအချိန် ဒီအခါ ဒီနက္ခတ်မှာ…ဒီလိုခေါ်မယ်ဆိုတာ နာသိတယ်…
ခေါ်ပါ..ခေါ်ပါ… ဒက်ခေါင် ကျေနပ်တယ်…ဟိ
တော်တယ် သွက်တယ်..ထန်းရည်ကလွဲရင် အကုန်စမ်းဘူးတယ်..
နာ့ သီမီးလေးဘယ်သူလည်း နီ မသိပါဘူး။
ရှောင်တယ် ဆရာရေ့ …ရှောင်တယ်..။
လက်မ ဘယ်လိုထောင်ပြရလဲ မသိလို့ ..
Wow ရေ… ဒီမှာ CJ ကြီး ကထူးဆန်း ခေါ်နေတယ်ကွဲ့…
စာတွေရော.. ကဗျာတွေရော… ပန်းချီကားတွေရော…
သဂျီးကို အဲဒီ ရွှေဒုံး ပြကြည့်ပါလား၊ သူဂ အယုန်ဗူးဒဲ့။ အဆတရာ အကြောပေး လောင်းကြေးထပ်ရဲသဒဲ့။ မာမွတ်ခိုမ် နာမည်တပ် ပေါ်တင် စိမ်ခေါ်စာ ရေးကြည့်ပါလား၊ ဆြာခေါင်ကြဒေါ့ မူလာသဂျီး မူလကျီလုပ် မသိခြင်ထောင် ဆောင်နေဒယ်။ ဂမ္ဘီရလောက ကိုယ်စား၊ ပရလောက ကိုယ်စား၊ ၃၁ဘုံကိုယ်စား၊ လောကီ လောကုတ် ကိုယ်စား၊ ပညတ် ပရမတ် ကိုယ်စား၊ ရှေးနောက်ဘဝ သံသရာ ကိုယ်စား မာမွတ်ခိုမ် လျှာပွတ်ထိုင်သွားအောင် လက်ခမောင်းခပ် ပြလိုက်စမ်းပါဗျာ..။ ဗေထိ ဗေထိ ဗေပုံထိ.. သဂျီးဇုတ် ထွက်ခဲ့စမ်း..
ကျနော်က ချစ်ခြင်းတရားကို မသိတဲ့သူကို ကျနော့်နှလုံးသား မပေးတတ်ဘူး
ဘီယာမသောက်တတ်တဲ့သူကို ၀ိုင်ပုလင်း လက်ဆောင်မပေးဘူး…..
မယုံတဲ့သူကို ကျနော် မပြဘူး..ယုံပါလို့ လည်း မပြောဘူး
ယုံတဲ့သူကို ပြတတ်တယ်..အဲတော့ ၂ဦးလုံး အချိန်မကုန်ဘူးပေါ့…
သူဂျီးက တမျိုးဘဲလို့ တော့ ကျနော် မြင်မိပါတယ်..
ဒါပေမယ့် ကျနော်က သူ့ ကို နားလည်နေသလို စိတ်ထြဲဖစ်နေတယ်..
ကျနော်ကတော့ ကျနော် ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တာလေးတွေကိုဘဲ ရေးတာလေ…
တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အတွေ့ အကြုံမတူတော့ …စဉ်းစားချည်းကပ်ပုံကလည်း မတူဘူးပေါ့..။
၀ါးထဲက သဘာဝဓါတ်ကို မီးပေးပြီး ပေါင်းခံလိုက်တော့ အယ်လ်ကိုဟော ဓါတ်ပြုတယ်..
ယောင်္ကျားရင့်မကြီးကို ဖြတ်ဖောက်ချုပ်လုပ်တော့ sexy ဆန်ပြီး သိပ်လှတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်လာတယ်..
“အရေးကြီးဆုးံကတော့ ထိုးကျွေးရတာများနေရင် လမ်းကိုပြန်စဉ်းစား…။
ချကျွေးခံရတဲ့ ဘ၀တွေ နာတယ်….။ ။”
ရွှေတိုက်စိုး ပုံပြင်ဖတ်ပြီး ကိုမိုက်ဆိုင်ကို လာချင်လှပြီ
ဆြာခေါင်ရေ ကျမတို့ကြီးတဲ့အထိ လမ်းထဲမှာ ဖိုထိုးတဲ့အဘကြီးတွေတွေ့ဖူးတယ်။
မြန်မာတွေရဲ့ နည်းပညာမှတ်တမ်းမှာ မတိကျတာတွေ အများကြီးဘဲ..
လာအားပေးတာ ကျေးဇူးပါ မနန်း။
ကျနော်ရေးတာ တခု မေ့ကျန်ခဲ့လို့ …
ဖိုထိုးသူတိုင်း ရွှေလမ်း( စားလမ်း) လိုက်တာ မဟုတ်ဘူး မနန်း။
တစ်ချို့ က ဓါတ်လမ်းသက်သက်လိုက်တာ..တစ်ချို့ က ဆေးလမ်းလိုက်တာ မနန်းရဲ့ ..။
ဆိုတော့…ဖိုထိုးသူတိုင်းကို ရွှေမဖြစ်လို့ လဲ သွားပြောလို့ မရသေးဘူး…။
သူ ဘာလမ်း..ဘာဓါတ်ထိုးတာလဲ ဆိုတာလဲ သိဘို့ လိုသေးတယ်လေ..။
အာ့တွေတော့နားမလည်ဘူး ဖိုထိုးတယ်ဆိုရင် ရွှေဖြစ်ချင်လို့ထိုးတယ်ပဲမှတ်တာ ဗဟုသုတတိုးပြန်ပြီ။
ဘုရား ဘုရား တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ဒီလောက်စုံတဲ့လူ ဒီတစ်ကြိမ်ပဲ ကြုံဖူးတယ်။ မျှစ်ကြော်လည်း ဆရာခေါင်လို ၈ ရက်ဖွားပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လုံးဝမတူဘူး။ အဲဒါ ဗေဒင်ဆိုတာ မှားလို့ပေါ့။
ဒီလိုလေ။ မျှစ်ကြော်က ဘ၀ လုံးဝမစုံဘူး။ အကျဉ်းကျသလိုမျိုး နေခဲ့တာ။
ဆရာခေါင်ကို စွယ်စုံရလို့ပြောယုံနဲ့တောင် မရဘူး။ ဘ၀ပါစုံတယ်လို့ ပြောရမယ်။ အနုပညာမှာလည်း စွယ်စုံရ၊ ဘ၀ကလည်း အရမ်းကို စုံတော့ သိထား တတ်ထားတာတွေကလည်း အင်မတန်စုံလင်ထွေပြားလွန်းတယ်။ အံ့သြစရာကြီးပါလား။
ကျနော်က အဲလောက်ကြီး မဟုတ်သေးပါဘူး…
မပြုံးတို့ လည်း တော်တာပါဘဲလေ…
လောကမှာ ရှိတဲ့ ပန်းတိုင်းဟာ သူ့ အလှနဲ့သူ့ ရနံ့ ကိုယ်စီရှိပြီးသားပါ…။
မပြုံး အိမ်နာမည်လေးက ချစ်စရာလေး..မျှစ်ကြော်တဲ့…။
ခေါင်နဲ့ခိုမ်. အဲ့မှာ စတွေ့တော့တာပဲ. အာဟိ.
အော်… အခု ရဟူဒီ မျိုးနွယ် ဖြစ်နေပြန်ပြီလား..
အဲ့..၂ယောက်က ခု ဆာကေးသောက်တာ သင်ဘို့..ကြံနေတာ။
အများစုလွဲ​နေရတာကလည်း အထက်​က​ပြောခဲ့သလို အချိန်​အတွယ်​နဲ့
​ရှေးစကား​ရှေးအ​ခေါ်အ​ဝေါ်​တွေကို အဓိပ္ပါယ်​ ​ကောက်​လွဲ​နေခဲ့ကြတာပဲ ။
အခုလည်း အဲဒီလို​ရွှေတစ်​စကို မိတ်​​ဆွေ​ရွှေသမား​တစ်​​ယောက်​​ပြောပြလို့
နိုင်​ငံ​ရေးမှာလည်း ဖို ထိုးသလိုမ​အောင်​မြင်​ကြတာများသကိုး
ကိုဆာရဲ့ ပို့ စ်တွေကို လာမမန့် ဖြစ်တာရှိရင် တမျိုးမထင်နဲ့ နော်..
ကျနော် မအားတာ များလို့ ….။
သရဲမ ဇာတ်လမ်းတွေ ရေးဦးလေ..။
ရှင်အဇ္ဇဂေါ န မ တဲ့ ကိန်း ဆိုက်မည်နဲ့ ကျနော်တို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ ကြ တာ ကြာပေါ့ ဗျာ
ကျနော်တို့ တွေ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းပြတော့ ရှင်အဇ္ဇဂေါန မ,တဲ့ကိန်း သီချင်း ကို မာန်နဲ့ ထန်နဲ့ ဆိုတာပေါ့..
ကြာတော့ ဘာဖြစ်လာလည်းဆိုတော့ ကာရာအိုကီ ဆိုင်ကလူ ချမ်းသာသွားရော…။
ဟိုးအရင်ကဆို.. ဂျာမဏီပေါ့…။ သွေးနဲ့သံဝါဒ(Blut und Eise)စိတ်ဓါတ်နဲ့အရင်းတည်တာလေ…။
ကြာတော့ကြာပါပြီ..။ ဂျပန်က.. အဂ္ဂိရတ်နည်းနဲ့လုပ်တဲ့.. ရွေတုံးကြီးတွေ့ဖူးတယ်..
ငရဲမီးစားလည်းခံတယ်..။ အလေးချိန်လည်းတူတယ်..။ နန်းဆွဲလည်းရတယ်..။
အပေါ်ကဂျပန်နည်းပညာနဲ့တော့မဆိုပါဘူး..။ အောက်ကသတင်းက.. ဘက်တီးယီးယားကနေ ရွေထုတ်တာတဲ့..။
Yes, Science Has Found Bacteria That Makes 24-Carat Gold
Oct. 4, 2012 3:30pm Liz Klimas
စိန်ဖြစ်အောင်ပဲ.. အဂ္ဂရတ်ထိုးပြီး.. အလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့..။ ယူအက်စ်နဲ့..ဥရောပကပြောပါတယ်..။
အပူချိန်မြင့်တခုမှာ.. ဖိအားမြင့်တခုပေးရင်.. ကာဗွန်ကစိန်ဖြစ်တာပဲ..
အခုမြန်မာတွေတပြည်လုံးရဲ့.. ၅၀ရာခိုင်နှုန်းအထက်လောက်သုံးနေတဲ့.. စိန်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်..
လာဖတ်ရှုပြီး အချက်အလက်တွေ ပေးတာ ကျေးဇူးပါ..
ကျနော် တွေ့ တဲ့ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ဒကာလေး စိန်လုပ်ပါလားလို့ ပြောဘူးတယ်..
သူပြောတဲ့နည်းက ကျနော်တို့ တောင်ပေါ်တွေမှာ အလွယ်တွေ့ ၇တဲ့ ကျောက်တစ်မျိုးဘဲ..ကျနော် ပါးစပ်ဖျားတင် နာမည်မေ့နေတယ်.
အဲဒီ သန့် စင်တဲ့ကျောက်က သက်တန်းနုတယ်လေ..
အဲဒါကို ယူပြီး အုန်းသီးရင့်ရင့်တစ်လုံးကို ယူ…အခွံမခွာနဲ့.ထိပ်ပိုင်းကို လွှနဲ့ ညီအောင်ဖြတ်..ထိပ်ဖွင့်ပါ..အုန်းရည် မဖိတ်စေနဲ့ ..
ကျောက်ကို အုန်းသီးထဲထည့် အပေါ်ဖုံးပြန်ပိတ် ..ပြီးတော့ ရွှံ့ထူထူလေးမံပါ..
၃ပေ ပါတ်လည်.၂ပေ အနက်တူးထားတဲ့ မြေကျင်းမှာ အပေါ်အောက် ဖွဲမီးနဲ့၁လလောက် အပူပေးရင်..
ဂျပန်က ထုတ်တဲ့ စိန်စမ်းသပ်တဲ့ စက်မှာတောင် အဖြတ်ခံနိုင်တယ်လို့ ပြောတယ်..။
လွန်ခဲ့တဲ့၁၀နှစ်ကျော်ကတည်းက မြန်မာစိန်ဈေးကွက်မှာ အဲဒီနည်းနဲ့ …ဒိုင်သျိုလုပ်နေကြပြီ ..။
အဲဒိမှာ နည်း၇ပေမယ့် ဘာကွာလည်းဆိုတော့ အပူချိန်ဘယ်လောက်ဆိုတာ အတိအကျ မသိနိုင်တာက
တိုကျို ဘုရင့် တက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင်ပါမောက္ခ မစ္စတာဟန်တာရို နာဂါအိုကာ က လက်တွေ့ ကျကျ ပြဒါးကနေ ရွှေဖြစ်အောင်
အတိအကျလုပ်ပြတယ်.နည်းစနစ်လဲ အတိအကျထားခဲ့တယ်…အဲတော့ ဂျပန်တွေ ထုတ်စမ်း…စိတ်ကြိုက်ရွှေပေါ့..
ဘက်တီးရီးယားက ထုတ်တာတော့ ကျနော် ခုမှ သူကြီးဆိက သိရတာ..
ကျနော်သိတာက ရှေးဟောင်းအုတ်တစ်ချပ်ကိုယူ …ချိုင့်ကျင်းလေး အ၀ ၁လက္မလောက်နဲ့ ထွင့်ပေါ့ အုတ်မှာနော်..ပြီးတော့ အုန်းဆီစစ်စစ်ထည့်ထား ကျင်းထဲကို ..ကြေးနီစစ်စစ်ကို အရည်ပျော်အောင် အပူပေးပြီး အုန်းဆီထဲကို လောင်းထည့်…
အုန်းဆီကို ခံရည်ပြုတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့…ပြီးရင် အေးတဲ့အခါ ပြန်ဆယ်ယူ…အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အပူပေး အုန်းဆီခံရည်လောင်းရင် ၁၄ပဲရည် ရွှေဖြစ်လာရော..အဲဒါကို အခေါက် တမတ် ဓါတ်၁မတ်ရောရင် ၁၅ပဲ ၁၆ပဲ ရွှေ ဖြစ်လေပေါ့
..နောက် ရထားလမ်းဘေးက သွပ်တိုင်ကို ယူ…အဲဒါက သွပ်စစ်တယ်လေ.. နနွင်း စစ်စစ် ထက်အောက်ခံပြီး ချော်ကျအောင်ထိုး..
ချော်ကျအောင်ကတော့ လက်ချားပစ်ပေးတာပေါ့…အကြိမ်မျာားရင် ၁၄ပဲ …ဖြစ် ဆတူလမ်းတွေပါ..
အမှန်က ကျနော်က အရက်မသောက်ချင်ဘူးဗျ..
အရက်နဲ့ မတည့်တာလားမသိ..သောက်ပြီးရင် ခေါင်းတွေမူးလို့မသောက်ဘူးဗျ..
No wonder .ကိုမင်းသားက .ရုပ်ရည်ကိုက ဆားပုလင်းနှင်းမောင်ရုပ် …ခေသူမဟုတ်…ဘက်စုံရလို့ ..အမျိုးတော်ချင်တယ်ဂျာ…အဟီး
လောကမှာ မသေခင် လုပ်စရာတွေ ရှိသေးတယ် အိုင်ပီ ဆောရိုးရဲ့ ….
အိုင်ပီ အပြောအဆို မဆင်ခြင်ရင် အိုင်ပီရော ကျုပ်ရော….
ဒီ နှင်းဆီနက်ဂိုဏ်းက လေယာဉ်မယ်လေးက တယ်..ထက်ဆိုဘဲ…။
တစ်ကြိမ်လောက် ဆုံချင်တယ် အိုင်ပီရေ..။
အတိအကျ၊ စနစ်တကျ လိုက်စားရင် အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုချင်သပေါ့။
ရေးသွားတာက အမြင့်ပိုင်းလို ဖြစ်နေတာမို့ အကြောင်းအရာတော့ သိပ်ပြောတော့ပါဘူးဗျာ။
ကျနော် ထဲထဲဝင်ဝင် လိုက်စားနေတာတော့ ရှိတယ်ဗျ။
အရင်တုန်းကတော့ …ကိုကြီးကျော် ကိုကြီးကျော်နဲ့ ….
ခုမှ ဘယ်ကဘယ်လို အခေါ်အဝေါ်တွေ ပြောင်းသွားတာပါလိမ့်..
အာဟား…..အာဟားးး။( ဦးဇင်း ကျော်ဟိန်းသံစဉ်နဲ့ ဖတ်ပါ )
တော်ပါပေတယ် ဗဟုသုတလည်းရ ဖတ်သူမပျင်းရအောင်လည်း ဆွဲခေါ်သွားလို့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ချိန်းထားတာတောင် မေ့သွားတယ်။ ကွက်စိတ်ဆရာများ ဖြစ်ခဲဘူးလားမသိ။
ဦးခေါင်ရေ ( ခေါင်ရည် ဟု မဖတ်ရ )
မီးရထားလမ်းဘေးစိုက်ထားတဲ့ သွပ်ဓါတ်တိုင်ဆိုတာ ဟိုးးးးအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်းက စိုက်ထားတာတွေနော်။
အဲသဟာကြောင့်သွပ်စစ်လို့ သံချေးမစား အခုထိခံနေတာပေါ့။
ကြေးနီ အကြောင်းပါလာတော့ လက်ပတောင်းတောင်ကို သတိရမိသေး။
ကျောင်းစာအုပ်ထဲပါနေသေးတဲ့ စပယ်တောင်ဆိုတာ အခုတော့ အင်းပက်ကြီးကိုဖြစ်လို့ခင်ဗျ။
သူ့ဘေးမှာတော့ ဒုတ္ထာတွေရှိနေသေးတယ်။ အိုင်ဘင်ဟိုးတုံးက မထိရနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်စွန့်ပစ်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာ၊